ဖီဖာ 19 အသစ် PATCH ကို, ဂိုးသမား PETR ကရရှိသွားမရှိတော့သံခမောက်လုံးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်လာ - သတင်း - 2019
EA ၏မသာတိုက်ရိုက်ဂိမ်းထဲမှာချိန်ညှိဖန်ဆင်းတော်မူသောဖီဖာ 19, များအတွက် patch ကိုဖြန့်ချိ, ဒါပေမယ့်လည်းပြုပြင် meme နားလည်မှုလွဲဖြစ်လာဖို့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
2006 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဦးခေါင်းတွင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာပြီးနောက်ကရရှိသွားအကာအကွယ်သံခမောက်လုံးအတွက်လယ်ပြင်ပေါ်ထွက်အမြဲဖြစ်ပါသည်: လန်ဒန် "အာဆင်နယ်" သူ့ရဲ့ထူးချွန်ဘောလုံးကစားသမားဘ, ဒါပေမယ့်လည်းကြည့်ဘို့မသာလူသိများသည်အသက် 36 နှစ်အရွယ်ဂိုးသမား Petr ကရရှိသွားလက်ရှိပါဝင်သည်။
သဘာဝကျကျ, ဘောလုံးထဲမှာရှိသကဲ့သို့အကရရှိသွားတစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားပုံဖျောထား simulators ။ သို့သော်ဖီဖာ 19 developer များလွှဲပြောင်းညှိနှိုင်းမှုစဉ်အတွင်းဦးထုပ်နှင့်နေဆဲဝတ်စုံအတွက်ခကျြဂိုးသမားသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လွန်းဝေးကြပြီ။ ငါသည်သူ၏တွစ်တာအတွက်တိကျတဲ့ screenshots များထွက်တင်သောကြောင့်များနှင့်ကရရှိသွားသူ့ကိုယ်သူသတိပြုမိသည်။ "ဒါဟာမမှန်ပါဘူး, ယောက်ျားတွေ ... ငါလည်စည်းပေါ်တွင်တင်ချင်ပါတယ်!" - ကရရှိသွားရေးသားခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်က patch ကိုမှာ developer များဤပြဿနာကိုတညျ့ပါပြီ: အခုကရရှိသွားတစ်ဦးထုပ်မပါဘဲစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှကြွလာ ... နဲ့တစ်ဦးလည်စည်းပါ။ "ကျနော်တို့ကသူ၏လည်စည်းကိုတက်ခူး," - အဆိုပါ patch ကိုဖော်ပြချက်ကပြောပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Live Developer Q&A w Ion Hazzikostas- March 21 (နိုဝင်ဘာလ 2019).